Kismaayo News » Dareenka Dadweynaha Deegaanada Jubbooyinka
Dareenka Dadweynaha Deegaanada Jubbooyinka
Kn: Marka hore waxaan ka tacsiyeynayaa alle ha u naxariistee geerida ku timid Suldaan Cabdi Cali Sokor, guud ahaan bulshaweynta waamo, gaar ahaan ehelada iyo qaraabada Suldaanka,. Innaa lillaahi wainnaa ileyhi raajicuun.————————————————————————-
Ujeedada qormadan, waa daahfur iyo is dultaag, hadba mowduucii loo arko inuu mudan yahay in dabagal lagu sameeyo, amaba bulshada loo daahfuro. Waxaan doonayaa inay noqoto mid joogta ah, haduu daaim-ka idmo.
Waxaan aad u daneynayaa talada iyo tusaalooyinka dadweynaha, si dadaalkeenu u noqdo miday ku jirto danta dalka iyo dadka. Aniga waxaan ahay daahfure oo keliya, laakin dadweynaha reer Jubbaland ayaa laga doonayaa daadihinta barnaamijka, gaar ahaan dadka u dhuundoloola deegaanada Jubbaland iyo dibindaabyada daahsoon ee lala damacsanyahay. Dib’jir, duuflaal, dabshid isku diraya dad wada dhashay iyo dowladdiid toona ma nihin, laakiin waxaan diidannahay oo keliya in dastuurka la dayaco, dalka iyo dadkuna dayacmaan. Dareenka-yaga waa: “Isbaaro diidnay, dowladniman rabnaa”.
Mowduuceena maanta: Xiriirka Maamulka Jubbaland iyo dowladda dhexe.
Isfahamkii Kismaayo iyo Xamar!.
27. Des. 2012-ka waxaa magaalada Kismaayo gaaray wafdi wasiiro ah oo uu hogaaminayay Wasiirka warfaafinta dowladda dhexe, Cabdullahi Ciilmooge, si heer sare ah ayaa loo soo dhaweeyay. Shir jaraa’id oo ay si wadajir ah u qabteen wasiirada iyo maamulka Kismaayo ayaa lagu shegay in isfaham laga gaaray murankii ka dhex aloosnaa labada dhinac. Wafdiga wasiirada oo shir jaraa’id qabtay ka dib markii ay ku laabteen Xamar, waxay ku amaaneen mamulka iyo dadweynaha reer Jubbaland, wadaniyad, dowlad jaceyl iyo soo dhaweyn wanaagsan.
Niyad wanaaga Kismaayo: “ma daacad baa mise waa dani keentay”? Wixii ka dambeeyay waqtigaas, waxaa dhanka Kismaayo naga soo gaarayay baaqyo xambaarsan dejin iyo niyad-wanaag, baaqyadan oo ka soo fulay, mas’uuliyiin sar sare oo ka tirsan maamulka Kismaayo, sida Saxardiid, Seeraar, Raadaar. Waxaa ugu dambeeyay wareeysigii dhinacyada badan taabanayay ee uu gudomiyaha maamulka Kismaayo Sh. Ahmed Madoobe siiyay warbaahinta.
Xassan iyo Xamar: “daacad nimo danteenaa ka weyn”. Xassan iyo Xamar waxaa muuqata inay hayaan wadda ka duwan tan Kismaayo oo ah, xeyd’xeydasho, awood muujin, caga-jugleyn iyo cabsi gelin, sida laga fahmi karo tallaabooyinka diblumaasiyadeed iyo shirarka jaraa’id ee ay ka hadleen masuuliyiinta ugu sareeya dowladda-dhexe.
Wareysigii M. Xassan ee idaacadda VOA -da, waxaa ka buuxay, hadallo qadaf ah, qaar hanjabaad ah, iyo qaar ku xad’gud’baya sharciga dalka, sida inkiraada federalka: ” Jamhuuriyadda Soomaaliya”, “waxaan u digaynaa kuwa waligoodba degdegsan”, iyo hadalkii ahaa: “waxaa jiro kuwo been loo sheegay oo lagu yiri IGAD ayaa wax idiin dhisayso”. iyo hadalla kale oo badan oo ka soo fulay madaxweynaha iyo masuyuliyiin kale oo maamulkiisa ka tirsan.
Arinka ugu muhiimsan ayaa ah; shirkii ugu dambeeyay ee IGAD ee 23/01/2013 ka dhacay Addis Ababa, oo ay dowladda soomaaliya miiska saartay arimaha maamul u sameynta Jubbaland, Halkaas waxaa ka cad in mowqifka Xassan iyo Xamar ee maamul u sameynta Jubbaland uu ka sii xag’jiro, halkii uu markii hore iyo heshiis ku sheega ka hor taagnaa.
Doodeydu waxay tahay; “halkey iska qaban la’dahay dalaada, maxaa-se khaldan? sideebay isu waafaqayaan labadan mowqif, (niyad wanaaga ree Kismaayo, iyo balaaya hurinta Xamar iyo Xassan)?. Mar hadii-se, ay jirto daacad-nimo dhab ah oo ay reer Kismaayo u hayaan dowlad dhexe oo federaal ah, sida ay qireen wasiiradii booqday amaba ku cad siyaasadaha Reer Kismaayo, maxaa keenay in Adis Ababa lala aado?
Mar hadii Xassan xaalkiisu yahay: “Nin meeli u caddahay meeli ka madow, maxaa la gudboon dadka Jubbaland? Maamulka Kismaayo: “In dibnaha laisku haysto, ma dambaa inoogu jirtaa, sow ma haboona in warbaahinta lala hadlo?
Qore: Bishar Haji